Ahoana ny fomba hividianana anjara amin'ny fampiasana Safaricom Bonga Points - Victor Mochere
Ao anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Safaricom sy Nairobi Securities Exchange (NSE), ireo mpampiasa Safaricom dia afaka mampiasa ny Bonga Points azony hampiasa vola amin'ny tahiry ao amin'ny NSE. Ity fiaraha-miasa ity dia mikasa hanome ny mpampiasa Safaricom sy mpampiasa vola antsinjarany lanja bebe kokoa ho an'ny Bonga Points ary mamorona làlana bebe kokoa handraisana anjara amin'ny NSE ary handroahana ny fanamafisana ny toekarena. Ireo mpampiasa dia manangona teboka iray isaky ny vola Ksh 10 lany amin'ny feo, data, SMS ary ny frais M-Pesa, ary afaka manavotra ny Bonga Points amin'ny alàlan'ireo mpandray anjara amin'ny varotra nahazo alalana. Ireo mpampiasa Safaricom dia afaka manavotra ny isa azony amin'ny taha Ksh 1 isaky ny isa 5.
Ity misy fomba fampiasana Bonga Points hividianana fizarana.
2. App MySafaricom
Mba hividianana fizarana mampiasa teboka Bonga amin'ny alàlan'ny kaody USSD, araho ireto dingana ireto.
Mandehana any amin'ny 'Lipa Na Bonga Points'
Safidio ny 'PayBill'
Zava-dehibe amin'ny laharan'ny PayBill an'ny mpandray anjara amin'ny varotra
Ampidiro avy eo ny CDSC (Central Depository and Settlement Corporation) ho Account Number
Ampidiro avy eo ny vola tianao apetraka amin'ny kaonty CDSC anao
Mba hividianana fizarana mampiasa teboka Bonga amin'ny alàlan'ny fampiharana MySafaricom, araho ireto dingana ireto.
Sokafy ny fampiharana MySafaricom
Raha tsy manana ilay rindrambaiko ianao dia sintomy avy ao Play Store or App Store
Rehefa avy nisintona azy ianao dia sokafy ny fampiharana ary ampidiro ny nomeraon-telefaonanao hiteraka Tenimiafina iray Fotoana (OTP) izay halefa toy ny SMS ary hampiasainao hidiranao ao amin'ilay fampiharana
Kitiho ny 'Account'
Safidio ny 'Lipa na Bonga Points'
Safidio ny Pay amin'ny 'Number Paybill'
Ampidiro ny PIN-nao ary kitiho ny 'Tohizo'
Sakafo izay manatsara ny fitadidy sy ny fahasalaman'ny ati-doha
Zo fiarovana ny angona any Kenya